Loza teny Ampitatafika :: Fiara nitondra masera nivarina tany an-tanimbary • AoRaha
Niala lalana sy nivarina tany an-tanimbary ny fiara tsy mataho-dalana iray nandalo teny amin’ny vahilava Ampitatafika amin’ny lalam-pirenena voalohany, omaly tolakandro. Nisy masera iray tao anatin’ny fiara, niaraka amina tovovavy iray sy ny mpamily.
Samy naratra izy telo ireo ka noentina haingana teny amin’ny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Nisy mpitondra bisikileta iray no naratra ihany koa.
Eo am-pelatanan’ny zandary eny Ampitatafika ny fanadihadiana momba ity lozam-pifamoivoizana ity.
Ny angom-baovao nataon’izy ireo teny an-toerana no nahafantarana ny zava-nisy. Avy any Fenoarivo ilay fiara tsy mataho-dalana. Nikasa hisongona bisikileta teo alohany izy no voadonan’ny kamiao iray avy tao aoriany.
“Nikasa hisongona ihany koa ilay fiarabe. Niverina tany amin’ny ankavanan-dalana ilay fiara tsy mataho-dalana, rehefa nahatazana izany. Voakasiky ny kamiao izy ka nivarina tany an-tanimbary. Tafavily tany ihany koa ny bisikileta teo alohany. Ilay kamiao anefa tsy nijanona fa nanohy ny lalany. Tsy voaray ny laharany”, hoy ny zandary eny Ampitatafika.
Nivadika ny fiara, nony nilatsaka tao amin’ny tatatra manamorona ny tanimbary. Ny olona teo amin’ny manodidina no namonjy an’ireo tao anaty fiara. Tsy nahatratra azy ireo teny an-toerana intsony ny mpitandro filaminana.
Tonga teny Ampitatafika, rehefa neheno ny vaovao mampalahelo, ny relijiozy naman’ireto niharam-boina. “Haka marary any amin’ny hopitaly no anton-dian’ny masera, kanjo izao tra-doza izao. Voadonan’ny kamiao no nampivarina ny fiaran’izy ireo tany an-tsisin-dalana. Nandositra io kamiao io. Tsy misy ahiana ny fahasalaman’izy telo naratra”, hoy ny mompera Andry.
Hain-trano :: Fivarotana roa nirehitra tetsy Analakely sy Antsakaviro